Ubamba izigelekeqe esemoyeni uKabini
USERGEANT Zoliswa Kabini obamba izigelekeqe ngendiza enophephela emhlane Isithombe: SITHUNYELWE
Nomonde Zondi | August 19, 2021
IPHOYISA lesifazane laseMzimkhulu, KwaZulu-Natal, eliyi-Airborne Law Enforcement Officer ophikweni lwezindiza zombutho wamaphoyisa, lingomunye wabesifazane abayishumi kuphela abenza lo msebenzi kanti lithi uma wenza lo msebenzi kumele ube ngumuntu okwaziyo ukumelana nezimo ezahlukene.
USergeant Zoliswa Kabini (34) uthi useneminyaka ewu-12 ekulo mbutho kanti uthi into ebalulekile ukuthi ube nesibindi uma wenza lo msebenzi futhi ungatatazeli.
“Ngaqala ukuba yiphoyisa ngineminyaka ewu-22 ngo-2009. Ngineziqu zomthetho kanti ngingelinye lamaphoyisa esifazane awu-10 abamba izigilamkhuba esebenzisa indiza enophephela emhlane kulolu phiko eGoli,” kuchaza uSergeant Kabini.
Eqhuba, uthe umsebenzi wakhe ukuthi alekelele ngendiza enophephela emhlane uma besebenza, ikakhulu uma bejaha izigelekeqe ezenza ubugebengu obufana njengokudunwa kwezimoto, ukuntshontshwa kwemali nobunye ubugebengu obubucayi.
USERGEANT Zoliswa Kabini unxusa abesifazane ukuthi bangene embuthweni wamaphoyisa Isithombe: SITHUNYELWE
Uthe uma wenza lo msebenzi kumele ukwazi ukuhlola isimo futhi uhlale uwumuntu oqaphile ngaso sonke isikhathi.
“Kumele wazi ukuthi uma nisezimeni ezibucayi wenzenjani futhi uxhumana kanjani nozakwenu, akumele ube ngumuntu otatazelayo,” kusho uSergeant Kabini.
Uthe: “Ngithanda yonke into ngomsebenzi wami kanti angithuswa ukuthi ugcwele abantu besilisa ngoba konke abakwenzayo nami ngiyakwazi ukukwenza.
Ngiyabagqugquzela abantu besifazane abasha ukuthi beze kulo msebenzi, nabo badlale indima ekutheni senze izwe lethu libe yindawo ephephile.”